Ndi nne na nna niile choro ka umuaka ha diri ndu.
Oge nzipu ozi: Jun-23-2020
Ndi nne na nna niile choro ka umuaka ha diri ndu. Na mgbakwunye na nri, akwa wdg, arịa ụlọ ebe ụmụ ntakịrị na-ehi ụra, ịnọdụ ala ma na-egwuri egwu dịkwa ezigbo mkpa iji weta gburugburu ọcha. N'okpuru ebe a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka gị. Iji wepu uzu ahia gi mgbe nile, hichapu ihe…GỤKWUO »
Coronavirus (COVID-19) na ilekọta ụmụ gị
Ọ bụrụ na ịnwere otu ụmụaka ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ karịa, na-agbaso ndụmọdụ ahụike ọha: 1. can't nweghị ike ịtụkwasị ụmụaka obi maka iwepụta isiokwu ndị siri ike. ya mere ịkwesịrị igosipụta onwe gị dịka isi iyi nke ozi. Ihe omuma nke ihe omuma 2.GỤKWUO »
Ọ bụrụ na ị dị ime, jisie ike mara na ndụmọdụ ahụ, nke na-agbanwe n’ihu: 1. A dụrụ ụmụ nwanyị dị afọ iri na asatọ ka ha kwụsị ịkpọ ndị ọzọ otu izu. Nke a pụtara izere nnọkọ buru ibu, ndị ezinụlọ na ndị enyi gị na-enwe nnọkọ ma ọ bụ na-ezukọ na mpaghara ọhaneze dị ka cafes, ụlọ oriri…GỤKWUO »
Coronavirus (COVID-19) na ilekọta nwa gị
Anyị maara na nke a bụ oge nchegbu nye mmadụ niile, na ị nwekwara ike inwe nsogbu ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ mụọ nwa ma ọ bụ nwee ụmụ. Anyị ejikọtara ndụmọdụ maka coronavirus (COVID-19) ma lekọta ha nke dị ugbu a ma ga-anọgide na-emelite nke a dịka anyị maara ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị…GỤKWUO »
Ntuziaka iji chebe nwa gị ka ọ dị mma ma nwee obi ike ka ọnụnọ coronavirus na-agbasa
Oge nzipu ozi: Apr-26-2020
Anyị maara na nke a bụ oge nchegbu nye mmadụ niile, na ị nwekwara ike inwe nsogbu ụfọdụ ma ọ bụrụ na ị dị ime ma ọ bụ mụọ nwa ma ọ bụ nwee ụmụ. Anyị ejikọtara ndụmọdụ maka coronavirus (COVID-19) ma lekọta ha nke dị ugbu a ma ga-anọgide na-emelite nke a ...GỤKWUO »
Gini mere nwa ohuru ji egwuri egwu?
Oge nzipu ozi: Mar-20-2020
Ndị nne na nna nwere ahụike nwa kwesịrị ịmara na ọ bụrụ na ha dina nwa ha ụra, ndị nne na nna nwere ike na-eche na nwa ha ga-egbu ya, yabụ na ha agaghị ehi ụra nke ọma n'abalị; ma mgbe nwa ahụ na-ehi ụra, n'ihi njirimara anụ ahụ nke nwa ahụ, ọ ga-eto ma pee site n'oge ruo n'oge ...GỤKWUO »
Did họrọ ezigbo akwa ụmụaka?
Oge nzipu ozi: Mar-06-2020
Akwa nwa ahụ ọ dị mkpa? Nna ọ bụla nwere echiche dị iche iche. Ọtụtụ ndị nne na-eche na ezuru nwatakịrị ahụ na nne na nna ijikọ ọnụ. Ọ baghị uru itinye akwa ụmụaka iche. Ọ dịkwa mma iri nri mgbe ị tetara n'ụra n'abalị. Akụkụ ọzọ nke ndị nne na nna ahụ chere na ọ…GỤKWUO »
Kedu otu ị ga - esi họrọ oche oche nwa dị elu?
Oge nzipu ozi: Feb-01-2020
Nwatakiri bu olile anya nke ezi n’ulo, umuaka toro ubochi, nne na nna na - ahuta ya n’anya ma obu n’ime obi, site na mgbe omumu rue uto, site na mmiri ara inye onwe ya, o kwesiri ilezi anya nke oma ma nna, n’oge a, ịhọrọ darling rie oche bụkwa isi okwu, yabụ otu esi ahọpụta…GỤKWUO »
2019 Obi oma + Jugend Fair
Oge post: Dec-30-2019
Ezigbo ndi mmadu, anyi ga - aga 2019 K + J International Baby ka Teenager Fair n’oge Sep 19 ~ 22th, 2019 na Koeln, Germany. Nabata ileta nguzo anyị (11.3 E-056) na ngwaahịa ọhụrụ, nwee olile anya ịchọta ohere ndị ọzọ iji jeere gị ozi! Ekele diri ndi Faye bi GỤKWUO »
Ndi nne na nna niile choro ka umuaka ha diri ihe ...